မမသီရိ: အားကျစေချင်..သူ့ကို ပင်...
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဟာ... အာရှတိုက်သား မြန်မာများ အတွက်တော့.. ထူးခြားတဲ့.. အထိမ်း အမှတ် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ.. အကြီးဆုံး..တစ်ခု တည်းသော.. နိုင်ငံ တစ်ကာ.. ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ.အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်တဲ့.. ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးရဲ့... တတိယမြောက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ၂ ကြိမ် ဆက်တိုက် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်း.. ခံခဲ့ရတဲ့... မြန်မာ နိုင်ငံသား.. ဦးသန့်ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ ကျရောက် တဲ့ ရာပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား.... ကျရောက်တဲ့.. နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လို့ပါ.....။
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ... အမြဲ တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်တဲ့... သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် တွေ က...အထူး တလည် ဖေါ်ပြနေစရာ မလိုတော့ပါ ဘူး...။ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံ ပေါင်း ၂၀၀ နီးပါး ထဲ ကမှ...ထူးထူးချွန်ချွန် ..ပေါက်ပေါက် မြောက်မြောက် နဲ့... ဒီနေရာ ကို ရဘို့ ဆို တာ..ဘယ်လောက် ခက်ခဲ မလဲ..ဆို တာ.. လူတိုင်း နားလည် နိုင်ပါ တယ်..။ ဦးသန့် နဲ့ ပတ်သက် တဲ့.... အထ္ထုပထ္တိတွေ.. မှတ်တမ်း.. မှတ်ရာတွေကို.. စာဖတ်သူ အတော် များများ.. လဲ ဖတ်ဖူး ကြမှာ ဖြစ်ပေမဲ့... ကျမ ဘ၀မှာ.. လေးစား စံပြု ခဲ့ ရတဲ့... ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦး အတွက်.. သူ့ ရဲ့ ဘ၀ မှတ်တမ်း အကျဉ်းလေးကို...ဗဟုသုတ အလို့ငှာ... သေချာ မသိသေး တဲ့.. လူငယ်တွေ အတွက် ရှာဖွေ တင်ပြ လိုက် ရပါတယ်....။ ဦးသန့် ဟူသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ သားကောင်း တစ်ဦးကြောင့်... ကျမတို့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ် သတင်း ဟာလဲပဲ.. ကမ္ဘာ့ အလယ် ဂုဏ်ဝင့်ထည် ခဲ့သလို... ကမ္ဘာ တည်သရွေ့ မှာ လဲ... သူ၏ အမည် နာမနဲ့ အတူ တကွ... UN ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကတစ်ဆင့်... ကမ္ဘာ့ သမိုင်းကြောင်း မှာ.. ထာဝရ တည်မြဲ နေတော့မှာ မို့... ကျမ တို့ မြန်မာ မှန် သမျှ..သူ့အတွက်..ဂုဏ် ယူ ကြရ အောင်လား..ရှင်....။
- ၁၉၀၉ ခု ဇန်န၀ါရီ လ ၂၂ ရက် သောကြာနေ့တွင်.. ဧရာဝတီတိုင်း.. ပန်းတနော်မြို့.. အနောက်ပိုင်း ရပ်နေ.. အဘ. မြေပိုင်ရှင် ဦးဘိုးနှစ် နှင့်.. အမိ ဒေါ်နန်းသောင်တို့မှ.. ဖွားမြင်ခဲ့ ပါသည်။
- အသက် ၅ နှစ် အရွယ်တွင်.. ပန်းတနော်မြို့ရှိ ဆရာကြီး ဦးဘဟန်၏ မြန်မာ ကျောင်းတွင်.. စတင်ပညာ သင်ကြားခဲ့ သည်။
- အသက် ၉နှစ်အရွယ်တွင်.. စတုတ္ထတန်းသို့ တက်ရောက်ပြီး.. ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အလယ် တန်း ကျောင်းတွင် တက်ရောက် သည်။
- အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှ စပြီး..အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယား နှင့် ဆာ အာသာ ကိုနင်ဒွီုင်း တို့ ၏ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စာ အုပ်များကို သဲကြီးမဲကြီး.. စတင်ဖတ်ရှူခဲ့သည်။
- ၁၉၂၂ တွင် ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အလယ်တန်းကျောင်းမှ သတ္တမတန်း အောင်မြင်ပြီး အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်း သို့ပြောင်းရွှေ့ ပညာ သင်ကြားသည်။
- အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် ဖခင်ကြီး ဆုံးပါးခဲ့ သည်။
- ၁၉၂၆ တွင် အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပထမ နေခဲ့သော ကျောင်းဆောင်မှာ.. တကောင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး..ထိုမှ ပုဂံဆောင်.. နောက် မေအောင် ကျောင်းဆောင် သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ သည်။
- ၁၉၂၈ တွင် ဥပစာတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး.. ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကို ဆက်မတက်တော့ ပဲ.. ပန်းတနော်ပြန်ကာ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင်.. အထက်တန်းပြ ဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- ၁၉၃၁ တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ပညာရေးဌာနမှ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော. အထတ်တန်း ဆရာဖြစ် စာမေးပွဲ ကို ၀င်ရောက် ဖြေဆိုရာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး. ပထမ ရခဲ့ပြီး... ပန်းတနော် အမျိုးသားကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် အခါ.. အသက် ၂၂ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။
- ၁၉၃၄ နိုဝင်ဘာလတွင် ပန်းတနော် မြို့မှပင် .. ဒေါ်သိန်းတင်နှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခဲ့သည်။
- ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သခင်ထွန်းအုပ်တို့က ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူကာ.. မြန်မာ့ ပညာရေး စီမံကိန်း သစ် ကို ရေးဆွဲ ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ သဖြင့် ထိုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်တွင်..အပြီးသတ်ရေးဆွဲ ပေးခဲ့ သည်။
- ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ သော..အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီး.. အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသော အစိုးရအဖွဲ့ သစ်တွင် ဖဆပလ အဖွဲ့ ချုပ် ပြန်ကြားရေး အရာရှိအဖြစ် ၀န်ကြီးချု့ ဦးနုက ခေါ်ယူ ကာ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ သည်။
- ၁၉၄၈ ခု ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၅ လ အကြာတွင် ပြန်ကြားရေး ဌာန ညွှန်ကြားရေးဝန်၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ အတွင်းဝန် နှင့် အသံလွှင့်ဌာန ညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ် ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- ၁၉၄၉ တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး.. ၁၉၅၀ ခုနှစ်ထိ.. မြန်မာ့အသံမှ.. နေ၍ တရားဦးပဒေ စိုးမိုးရေး.. ဒီမိုကရေစီဝါဒ၏ နက်နဲသော သဘောတရားများ ပေါ်လွင်ရေး. ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စများအတွက်.. အချိန်မှန် အသံလွှင့်ပြောကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်.. မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ကော်မရှင်နှင့်.. မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပေ အသင်း တို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ရသည်။
- ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်..မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အကဲဖြတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
- ၁၉၅၂ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ၈ နှစ်တာ ပြည်တော်သာ စီမံကိန်း ကို ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲ ခဲ့သည်။
- ၁၉၅၂ ခုတွင် ပင်ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးသို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ဦးဆောင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ ရသည်။ (ထိုအချိန်ကျမှ ..အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံ ကို စတင် ၀တ်ဆင် သည် ဟု မှတ်သား ရပါသည်။)
- ၁၉၅၃ တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး၏ စီမံကိန်းအတွင်းဝန် အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်း ခံရသည်။
- ၁၉၅၄ တွင် ၀န်ကြီးချုပ်၏ အတွင်းဝန်ရာထူးတွင် ခန့်အပ်ခံရပြီး..
- ၁၉၅၅ တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဘုတ်အဖွဲ့.. အတွင်းဝန် ရာထူးကိုပါ ပူးတွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ ရသည်။
- ၁၉၅၇ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
- ၁၉၆၁ နိုဝင်ဘာလဆန်းတွင်.. ဦးသန့်အား. ကွယ်လွန်သူ လက်ရှိ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဒက်ဟမ်းမာရှိူး ၏ နေရာတွင် ယာယီ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်ထားရန် လုံခြုံရေး ကောင်စီမှ ရွေးချယ် တင်သွင်းပြီး အထွေထွေ ညီလာခံကြီးမှ..ချွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံခဲ့သဖြင့်.. ယာယီကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
- ထို့နောက် ၁၉၆၃ ခု ဧပြီလတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ တတိယမြောက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် (အမြဲတမ်း) ဖြစ်လာခဲ့သည်။
- ၁၉၆၇ ဒီဇင်ဘာလတွင်.. မိမိဆန္ဒမပါတော့ သော်လည်း.. လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ တောင်းဆိုချက်၊ အထွေထွေညီလာခံကြီး၏ ကန့်ကွက်မဲ မပါသော ထောက်ခံချက်များ ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒုတိယ သက်တမ်း ကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။
- ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူးမှ တရားဝင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့ပြီး..
- ၁၉၇၄ ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် အသက် ၆၅ နှစ် အရွယ်တွင် ပါးစောင်တွင်ဖြစ်သော.. ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ ပါသည်။
- ကွယ်လွန်ချိန်တွင်..ဇနီး ဒေါ်သိန်းတင်၊ သမီးအရင်း ဒေါ်အေးအေးသန့် နှင့် မွေးစားသား ဦးစောလွင် တို့ ကျန်ရစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေစဉ် အတွင်း.. ဦးသန့်၏ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ.. အံ့မခန်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်...။ တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကို ဦးတည် ခဲ့သော.. ကျူးဘား နိုင်ငံ ရောက် ဆိုဗီယက် ဒုံးပျံတင် သဘောင်္ များ ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ သည့် ကျူးဘား-အမေရိကန် ပဋ္ဋိပက္ခ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် အနောက် အီရီယန် ပြသနာ၊ ဆိုက်ပရပ်စ် ပြသနာ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အရေးအခင်း၊ အိန္ဒိယ - ပါကစ္စတန် စစ်ပွဲ ၊ မြောက်ဗီယက်နမ် သို့ အမေရိကန် ဗုံးကြဲမှု ရပ်စဲရေး အပါ အ၀င်၊ ကမ္ဘာ့ လောင်စာ ပြသနာ ကြီးငယ်တို့ အား.. စွမ်းစွမ်း တမံ ကြိုးစား ဖြေရှင်း ပေးခဲ့ပါသဖြင့်... ကမ္ဘာက ၀ိုင်းဝန်း လေးစားခြင်းခံ ခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး .. တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသန့် ..မည်သည့် အတွက် အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့ ရ သနည်း။
၁။ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ...ကိုယ်အမူအယာ ရှိခြင်း၊
၂။ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ...နှုတ်အမူအယာ ရှိခြင်း၊
၃။ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ...စိတ်အမူအယာ ရှိခြင်း၊
၄။ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ...မျှတသော ဝေဖန်မှုရှိခြင်း၊
၅။ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ...ကိုယ်ကျင့်တရား ရှိခြင်း၊
၇။ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော မေတ္တာတရားအား လက်ကိုင်ထား ခြင်း၊
၈။ ငယ်စဉ်ကပင် အပတ်တကုပ် အစဉ်မပြတ် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခြင်းကြောင့်.. အင်္ဂလိပ်စာတွင် သူမတူအောင် ထူးချွန်ခြင်း၊
၉။ မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်နှင့်မှ ရန်လို မုန်းထား မရှိခဲ့ ခြင်း၊
၁၀။ သန့်ရှင်း သေသပ်သော ၀တ်စားဆင်ယင် မှု ရှိခြင်း၊
၁၁။ အမှန်တရား ကို မြတ်နိုးပြီး.. အမှန်တရားအတိုင်း ချင့်ချိန် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၁၂။ ကျောင်းဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ ဖြစ်ခဲ့သူ ပီပီ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်ပြည့်ဝခြင်း၊
(ကျမ လက်လှမ်းမမီ သော ၀ိသေသ များ ..များစွာ ကျန်နိုင်ပါသေးသည်..။)
စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်း ဘ၀ အထွေထွေ စသည့် ဘ၀ မျိုးစုံ ကို ကျင်လည် ကျက်စား ခဲ့ သည့် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ ကြီး ဦးသန့်အတွက် ..ကျမတို့ အစဉ်ထာဝရ ဂုဏ်ယူနေရမှာ မလွဲပါ ဘူး ရှင်............၊။
ဦသန့်ရရှိခဲ့ သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ များအား.. အောက်ပါ Link တွင်သွားရောက်ဖတ်ရှူ နိုင်ပါ သည်။
အခြားသော.. ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်များ အကြောင်းကိုတော့ အောက်ပါ link တွင် သွား ဖတ်ပါ။
ဦးသန့်နှင့် နော်ဝေဘုရင် ပဉ္စမမြောက် အိုလပ်ဖ် (၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်)
ဂျမေကာ နိုင်ငံ ကင်စတန်မြို့တော်၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးနေသော ဦးသန့်
ကြီး ၃ ကြီး နှင့် ဦးသန့် (၀ဲမှယာ ..အမေရီကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒင်းထရစ်၊ ဆိုဗီယက် နိုငငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂရိုမီကို၊ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လော့ဒ်ဟုမ်း)
ဒိန်းမတ်နိူင်ငံ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွင် မိန့်ခွန်းပြောနေသော ဦးသန့်
(၁၉၆၂ မေလ ၈ ရက်)
အိုင်ယာလန်သမ္မတ အာမွန်ဒီဗလီယာ (၀ဲ) နှင့် ဦးသန့် (၁၄-၇-၁၉၆၁)၊ ဒဗလင်မြို့တော်
ဦးသန့်၊ ဂျက်ကလင်းကနေဒီ၊ ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်သ့အမတ်ကြီးအက်ဒလေစတီဗင်ဆင်
သြစတီးရီးယား သမ္မတ အဒေါ့ဖ် စကပ်ဖ် နှင့် ဦးသန့် (၃-၉-၁၉၆၂) ဗီယင်နာ
ကုလဌာနချုပ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး တစ်ခု
(ဤဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြထားသော အကြောင်း အရာ အများစု နှင့် ဓါတ်ပုံများအား... ၁၉၆၇ ခုနှစ် တွင် မြ စာပေ တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော စာရေး ဆရာ တက္ကသိုလ် စိန်တင် ရေးသား ပြုစုခဲ့ သည့် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ.. ဦးသန့် စာ အုပ်မှ.. ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြ ထားပါ သည်။)
Posted by မမသီရိ at 1/22/2009 07:49:00 AM
မမ ရေ့ ခုမှ သေချာဖတ်ခွင့်ရတယ် ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ အရင်လို ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကို မျှော်လင့်မိတယ် ပြီးတော့ သူတို့တွေအတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ် ဒါတွေကလည်း အတိတ်က ဒဏ္ဍာရီတွေအဖြစ်နဲ့သာပါပဲ အခု တကယ်လက်တွေ့မှာတော့.....................။
Wednesday, January 21, 2009 10:30:00 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မသိသေးတာတွေ အများကြီးပဲ
သေသေချာချာကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Over View တစ်ခုပဲ အစ်မရေ...။
"ကန့်ကွက်မဲမရှိ" အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ကြက်သီးတောင် ထတယ်ဗျာ....။
အကြံလာတူနေပါလား။ အစ်မက မြန်မာလို ရေးတယ်။ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာကို ထပ်ဆင့် မျှဝေတယ်။
ညက မအိပ်ပဲ အဲဒီပို့စ်ကို ထိုင်ရေးလိုက်တာ ၁ နာရီ ထိုးသွားတယ်။ နဂိုကတည်းက ရေးဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့် ရေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
Thursday, January 22, 2009 11:44:00 AM
မမသီရိရေ အခုမှ သေသေချာချာထပ်ဖတ်ခွင့်ရတာမို့ ကျေးဇူးပါပဲ။ လေးစားအားကျအတုယူစရာ စံပြမြန်မာတစ်ယောက်ပါ။
Thursday, January 22, 2009 8:13:00 PM
very nice documentation post. . thanks
Monday, May 11, 2009 6:49:00 PM